स्रोतमाथिको यो लडाइँ - Naya Patrika
स्रोतमाथिको यो लडाइँ
बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा तालमा माछा मार्दै, सोहोर्दै गरेका एक हुल मानिसको तस्बिरसहित एउटा सानो समाचार प्रकाशित भएको छ । ‘हजार मान्छे पसेर पचास लाखको माछा लगे’ शीर्षकमुनि छापिएको फोटोमा ‘गाउँपालिकाले ठेक्का दिन लागेको ताल स्थानीयले एकैछिनमा खाली गरे’ भन्ने क्याप्सन दिइएको छ । विषय साधारण छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा झन्डै ५२ बिघा जमिनमा फैलिएको सिमसार क्षेत्र छ, नाढिमन ताल । गाउँको सार्वजनिक जमिन गाउँपालिकाको संरक्षण दायित्वभित्र पर्ने नै भयो । यसपटक त्यहाँका माछा बेचेर पचास लाख आम्दानी गर्ने सुरमा थियो गाउँपालिका । तर, स्थानीय टाठाबाठा या ताल संरक्षण समितिमा रहेकाहरू यसका विपक्षमा थिए । हुन सक्छ यस्ता समिति सदस्यलाई यसरी तालका माछा अरूलाई बेचेर गाविसलाई आम्दानी र ठेकेदारलाई नाफा दिनुमा भन्दा वैकल्पिक उपाय गरी आफैँले केही कमाउने मनसायले लखेटेको होस् । यतिवेला तालबाट पानी लगेर खेत सिँचाइ गरिएकाले पानी कम थियो । गाविसले ठेक्काको सूचना निकाल्न सक्ने खबर स्थानीय सदस्यलाई हुने नै भयो । तिनले छिमेकीलाई उक्साए । छिमेकी पनि के कम ? आफ्नो क्षेत्रभित्रको ताल हो । माछा जहिले पनि किनेर खानुपर्ने । मौका यही हो भन्दै घरबाट झुल र तन्नासमेत बोकेर तालमा पसे । जसले जे–जति सक्यो उठायो । र क्षणभरमा माछाजति व्यक्ति–व्यक्तिका घरघरमा पुगे । गाउँपालिकाको खबरमा प्रहरी परिचालित भएर माछा समात्न आउनेलाई लखेट्नुअघि नै लगभग ताल रित्तिइसकेको थियो । भएको चाहिँ यत्ति हो ।
जेजति सकिन्छ नियन्त्रण गर्ने खोसाखोसको जुन चरित्र सर्लाहीमा देखियो, त्यसले हाम्रो समाजमा कसरी सरकारी वस्तु तथा सेवालाई लुटपाट गर्ने संस्कृति बढेको छ भन्ने संकेत गर्छ
तर, यसमा नेपाली समाज, राजनीति र यहाँका स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न भइरहेका संघर्षको अर्थराजनीतिक चरित्र भने प्रस्टसँग देखापर्छ । स्रोत स्थानीयको आफ्नै थियो । त्यसबाट हुने आम्दानी पनि स्थानीय गाउँपालिकाबाट उनीहरूकै लागि खर्च हुने थियो । सामान्य प्रचलन र हुनुपर्ने पनि गाउँपालिकामार्फत सो स्रोत परिचालन नै हो । यदि गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायलाई सहकारीका माध्यमबाट माछा पाल्न र त्यसबाट हुने आम्दानीले हरेक परिवारलाई केही न केही वितरण गर्ने या सामूहिक काममा लगाउने विकल्प पनि त्यहाँ नभएको होइन । तर, यसरी समुदायले नै प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि गाउँपालिकाले टेन्डर या सम्झौता प्रक्रियाबाट समुदाय या सहकारीलाई दिने एउटा प्रक्रिया त पार गर्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय टाठाबाठा र सर्वसाधारण जनतामा पनि सो तालका माछा मात्र देख्ने र अहिले, आजै जे–जति सकिन्छ, नियन्त्रण गर्ने खोसाखोसको जुन चरित्र देखियो, त्यसले हाम्रो समाजमा कसरी सरकारी वस्तु तथा सेवालाई लुटपाट गर्ने संस्कृति बढेको छ भन्ने गम्भीर समस्यातर्फ संकेत गर्छ ।
सबैलाई थाहा छ, नेपालमा सरकारमा जाने या पहुँचमा हुनेले सरकारी धन लुट्छन् । राज्य चलाउनेहरूले नै कानुन छलेर या मिचेर आफ्ना नाफाका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्छन् । अहिले पनि निजी विद्यालय सप्रिने र सार्वजनिक विद्यालय बिग्रिने कारण यही हो । त्यस्ता हजार उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यसको सिको गर्र्दै स्थानीय गाउँलेले पनि आफ्ना अघिल्तिर रहेको तालका माछा लुटपाट गरे । तिनले त्यसबाट व्यापारिक लाभ पनि लिने होइनन् । दुई छाक खाएपछि सकिने वस्तुमा यसरी किन लुटपाट मच्चियो त ? सीधा आउने उत्तर हो, सक्ने या ठाउँमा भएकाले करोड, अर्ब लुट्छन् भन्ने देखेकाले आफ्नो अघिल्तिर जेजति छ, त्यही लुट्ने प्रयास गरे । प्रवृत्तिका हिसाबले एउटा भयानक सांस्कृतिक रोग हाम्रो मनोविज्ञानमा छ भन्ने संकेत दिने यस घटनालाई मजाक नठानियोस् ।